निषेधाज्ञाबारे निर्णय गर्न सीडीओहरुको बैठक बस्दै, के हुने भो त ? | Khabar Sadan खबर सदन
Home अर्थ निषेधाज्ञाबारे निर्णय गर्न सीडीओहरुको बैठक बस्दै, के हुने भो त ?
निषेधाज्ञाबारे निर्णय गर्न सीडीओहरुको बैठक बस्दै, के हुने भो त ?
काठमाडौं उपत्यकामा जोरबिजोर प्रणालीमा सार्वजनिक यातायात चलाउने तयारी थालिएको छ । आज दिउसो बस्ने उपत्यकाका तीन जिल्ला (काठमाडौं, भक्तपुर तथा ललितपुर)का प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुको बैठकले यससम्बन्धी निर्णय गर्ने जनाइएको छ ।
यसअघि हिजो बसेको बैठकमा यससम्बन्धी कुरा उठेको थियो । यसअघि नै जोरबिजोर प्रणालीमा निजी सवारीसाधन सञ्चालनमा आइसकेको छ । असार १७ गतेबाट हवाई उडान पनि खुल्ने भएपछि हिजोको बैठकले सार्वजनिक यातायात पनि जोरबिजोर प्रणालीमा चलाउने निष्कर्ष निकालेको हो । निषेधाज्ञाका प्रावधान भने यसअघिको भन्दा थप खुकुलो बनाउने तयारी छ । अहिलेको निषेधाज्ञाबाट संक्रमणदरमा परेको प्रभाव विश्लेषण गरी आगामी रणनीति तय गरिनेछ ।
Previous articleसार्वजनिक यातायात जोरबिजोर प्रणालीमा चलाउने तयारी हुदै
Next articleनिषेधाज्ञा खुकुलो भए पनि अझै खुलेनन् यी क्षेत्र, कुन कुन क्षेत्रमा